အုန်းထမင်း၊ ထောပတ်ထမင်း နဲ့ကြက်သားဟင်း | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
ထုံးစံအတိုင်းအမျိုးသားက အဲဒီနေ့မှာရှောင်တခင်အိမ်ကို နောက်နေ့ညနေဧည့်သည်ဖိတ်လာကြောင်းည ၁၂ နာရီ မှပြောပါတယ်၊ ကြိုမပြောသည့်အတွတ်စိတ်ဆိုးလို့မရပါ။ မိန်းမ ဟင်းချက်ကောင်းကြောင်းကြွားရင်းဖိတ်ဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့လဲ။နောက်နေ့မနက်အိမ်မှာရှိပြီးသားကြက်၂ကောင် နဲ့ အုန်းထမင်းချက်ဖို့လုပ်ရပါတယ်။အဲဒီနေ့ကအလုပ်ကလဲ ၄နာရီသွားစာ သွားလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ၁၂မထိုးခင်အပြီးချက်ရပါတယ်။ သူကတော့အားရက်လေ။ အုန်းထမင်း နဲ့ ကြက်သားချက်ပါတယ်။ အုန်းနို့ပါမယ်ဆိုတော့ သွေးတိုးလေးထိန်းအောင် မကျည်းရွက်ချဉ်ရည်လေးလုပ်ထားပါတယ်။အိသက်ကညနေမှာအလုပ်ကပြန်မှထောပတ်ထမင်းထပ်ချက်ပါတယ်။ ကြည့်ကြမယ်နော်။
– ကြက်၂ကောင် (၁ကောင်ကို ၈တုံးရအောင်တုံးပါ)
-ပျဉ်းတော်သိမ် လေးရွက် curry leave
-လေးညင်း ၄ပွင့်, clove
-ကြက်သွန်နီ ၂လုံး၊ ဖြူ ၅မွာ ( ထောင်းပြီး)
ကြက်သားကို ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်တို့နဲ့နယ်ထားပါ။
ကြက်သွန်ထောင်းပြီးသားတွေကိုအရောင်တင်မှုန့် ၊ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ပျဉ်းတော်သိမ် လေးရွက်၊ လေးညင်း ၄ပွင့် တို့နဲ့ဆီသတ်ပါ။ ထုံးစံအတိုင်း ရွှေဝါရောင်သန်းရင် ကြက်သားရောပြီး ကြာကြာလုံးပေးပါ(အသားထဲအရသာဝင်အောင်)။ကြက်သားလေးများအပြင်အရောင်လေးများပြောင်းလာရင် ရေ နဲနဲထဲ့ပြီး မီးအနေတော်နဲ့အဖုံအုပ်ထားပါ။ မဆလာခတ်ပါ။
အုန်းထမင်းချက်ရန်( ၅ယောက်စာအချိုး) အိသက်ကညနေမှာထောပတ်ထမင်းမို့ ၃ယောက်စာချက်ပါတယ်
-ဆန် (၅ဘူး) ထမင်းပေါင်းအိုးရဲ့ဆန်ချိန်ခွက်
-သကြား ၄ဇွန်း( စတပ)
– ဆား ၂ဇွန်း
– ဆီ ၃ဇွန်း
ပေါင်းအိုးထဲကို ဆီထဲ့ ကြက်သွန်ဥထဲ့ သကြား၊ ဆား၊ ဆန်ဆေးပြီးသားထဲ့ပါ။ ပြီးရင် အုန်းနို့နဲ့ရေအပါအဝင် အိုးထဲရှိရေအမှတ် ၅ခွဲထားထဲ့ပါ။ ထမင်းချက်သည့်အတိုင်းချက်ပါ။ ကျတ်ရင်အနဲငယ်ဖွပေးပြီး ရပါပြီ။
– ဆန်( ၅ဘူး)
– ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်
-သီးစုံ( မုန်လာဥနီ၊ ပဲစိမ်း)
-သစ်ဂျပိုး၁ခေါက် cinnamon bark၊ ပျဉ်တော်သိမ် ၄ရွက်၊ဖာလာစေ့ ၄-၅ စေ့ cardamon ၊ လေးညင်း ၅ပွင့်
ပေါင်းအိုးထဲမှာပဲ ထောပတ်ပျော်ရင်သစ်ဂျပိုး၁ခေါက်၊ ပျဉ်တော်သိမ် ၄ရွက်၊ဖာလာစေ့ ၄-၅ စေ့၊ လေးညင်း ၅ပွင့် တို့ကိုအပူပေးပါ။ ပြီးရင် ရေဆေးပြီးဆန်များကိုထဲ့ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်,အသီး၊သီဟိုဠ်စေ့၊ စပျစ်သီးခြောက် တို့ထဲပါ။ ရေကို အမှတ်၅ကျော်ရုံလေးထဲ့ပါတယ် နဲနဲမွှေပေးပြီး ထမင်းချက်သလိုချက်လိုက်ပါ။ ကျတ်ရင် ထောပတ်နံ့အလွန်မွှေးသော ထောပတ်ထမင်းပူပူလေးရပါပြီ။
10 comments on “အုန်းထမင်း၊ ထောပတ်ထမင်း နဲ့ကြက်သားဟင်း”
06/03/2012 @ 9:16 pm
06/03/2012 @ 11:16 pm
ok tha nge chin lay.
10/03/2012 @ 4:58 pm
ဟင်းချက်နည်းတွေအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် မအိသက် ..
26/06/2012 @ 8:36 am
အမ ရေ အုန်းနို့ ၂ဘူး ဆိုတာ ဘယ်လို ၂ဘူး ကို ပြောတာလဲဟင်..ပြီးတော့ creamဘူးလား / အရေကြဲဘူး ကိုသုံးတာလား သိပါရစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
26/06/2012 @ 2:55 pm
အရေကြဲဘူး par 🙂
12/07/2012 @ 8:25 am
ထောပတ်ကို ရေဘယ်လောက်နဲ့ကြိုရမှာလဲ…ပြီးတော့ရေဆေးပြီးဆန်ထည့်ပြီးရင်ကော ရေထည့်ရဦးမှာလား
13/07/2012 @ 12:48 am
ထောပတ် ၁၅၀ ဂရမ် ရေကို အမှတ်၅ကျော်ရုံလေးထဲ့ပါတယ် :)|
20/07/2012 @ 9:55 pm
Eithet yay, I cooked butter rice with chicken curry for 20 people. Everybody liked it and atealot. Thank you so much for your delicious recipe.
22/07/2012 @ 12:09 am
Wow! I am so happy that u used my method and told me back , thank you 🙂
08/05/2013 @ 5:54 am
အမရေ ကျွန်မကတော့ အမနည်းအတိုင်း လူ ၁၀၀ စာချက်မယ်။ လာမဲ့ ၁၉ ရက်နေ့မှာပေါ့။အဲလောက်အမျာကြီး ဒါပထမဆုံးပဲ။ အိမ်မှာ ၂ ယေက်စာကတော့ အမနည်းအတိုင်းခဏခဏ ချက်စားဖြစ်တယ်။( Thanks for yur recipe naw ….) 🙂